Cristiano Ronaldo oo xalay markale Calaamadda Kabtanka dhulka ku tuuray kulankii xulkiisa Portugal uu guuldarrada kala kulmay Belgium – Gool FM
Haaruun June 28, 2021
(Seville) 28 Juun 2021. Cristiano Ronaldo ayay Kaamirooyinku soo qabteen isagoo calaamadda Kabtanka inta iska siibay dhulka ku tuuraya kulankii xalay xulkiisa qaranka Portugal uu guuldarrada kala kulmay Belgium ee Euro 2020.
Xulka Portugal ayaa isaga haray sanadkan koobka qarammada qaaradda Yurub kaddib markii ay guuldarro 1-0 ah kala kulmeen dhiggooda Belgium kulankii xalay ka dhacay dalka Spain.
Gool uu qeybtii hore ee kulankan dhaliyey Thorgan Hazard ayaa xulka Belgium kaga fulnaatay inay ka soo gudbaan Portugal kulankii ka dhacay garoonka Estadio La Cartuja ee dhaca dalka Spain.
Portugal ayaa cadaadiska ku badiyey Belgium qeybtii labaad ee ciyaartii xalay laakiin waa ay ku guuldarreysteen inay xitaa la yimaadaan goolka barbaraha.
Si kastaba ha noqotee, xulka ku guuleystay koobkan Euro sanadkii 2016-kii ayaa awoodi waayey inay jabiyaan daafaca Belgium, waxaana ay sanadkan tartanka uga hareen wareegga 16-ka, halka Belgium uu iska xaadiriyey siddeed dhammaadka Euro 2020.
Markii uu kulanku soo dhammaaday ayaa la arkay Weeraryahanka Kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo oo inta iska siibay calaamadda kabtanka xulkiisa Portugal ku tuuraya gudaha garoonka.
36-sano jirkaan CR7 ma’ahan markii ugu horreysay oo uu calaamadda kabtannimo ee xulkiisa Portugal dhulka ku tuuro, waxaana sidaan oo kale uu hore u sameeyey oo la xusuustaa kulankii ay la ciyaareen Serbia, iyadoo kaddib markii kulankaasi gool diilinta shabaqa dhaafay laga diiday uu calaamadda kabtanka xulka si caro ay ka muuqatay uu dhulka ugu tuuray.
Dadka la socda ciyaaraha ayaa baraha bulshada kaga maadeysanaya Ronaldo, waxaana ay ku tilmaameen mid aan ixtiraamaynin xulkiisa, sharafta xulkiisa Portugal-na dhulka la dhacaya maalin kasta.
Dhinaca kale xulka qaranka Belgium oo xalay soo reebay Portugal ayaa siddeed dhammaadka tartanka Euro 2020 waxa ay ku wajahayaan Talyaaniga 02 bisha July kulan ka dhici doona garoonka Allianz Arena ee ku yaala Magaalada Munich.
Cristiano Ronaldo threw his armband after the final whistle 😡 pic.twitter.com/J85IYwQP6s
Inuu neceb yahay inuu isticmaalo magaca ‘Depay’, waxa uu ka dhigan yahay Tattoo-ga uu ku qortay bushintiisa hoose, xiriirkiisa & Xaqiiqooyin laga yaabo inaadan ka maqal Memphis Depay